राती पैसा बाँड्न गएको भन्दै स्थानीयको घेराऊमा परेका वडाध्यक्ष आचार्य छानबिन पछि छुटे — donnews.com
राती पैसा बाँड्न गएको भन्दै स्थानीयको घेराऊमा परेका वडाध्यक्ष आचार्य छानबिन पछि छुटे
पोखरा, २८ वैशाख । मौन अवधिको समयमा पैसा बाँड्न हिडेको भन्दै स्थानीयको घेराऊमा परेका वडाध्यक्ष छानबिनपछि रिहा भएका छन् । पोखरा वडा नं. १६ का वडाध्यक्ष जीवन आचार्यलाई आज राति स्थानीय जनताले घट्टे कुनामा पैसा बाँड्न गएको भन्दै घेराऊ गर्दै प्रहरीलाई बुझाएका थिए । कास्की प्रहरी र अनुगमन समितिले छानबिन गरी केही नभेटेको भन्दै राति १० बजे वडाध्यक्ष आचार्यलाई छाडिएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डिएसपी एवं प्रवक्ता सुन्दर तिवारीले वडाध्यक्षलाई स्थानीय जनताले घेरेर राखेको अवस्थामा छानबिन गर्दा उनको साथबाट केही पनि नभेटेपछि जिल्ला अदालतका सूचना अधिकृत एवं निर्वाचन अनुगमन समितिको जिम्मामा छाडिएको बताए । डिएसपी तिवारीले भने–‘शान्ति सुरक्षाका हिसाबले केही पनि देखिएन । त्यहाँ जम्मा भएका केटाहरुलाई लखेट्ने काम तत्कालै गरियो । जोसँग पैसा छ भनेर भनिएको थियो, उहाँसँग केही भेटिएन । हामीले वडाध्यक्षलाई अनुगमन समितिको जिम्मा लगाएर हिड्यौं ।’
अनुगमन समितिका अधिकृत निल पनेरुले घटनास्थलमा पुगेर घटनाको छानबिन गर्दा उजुरी परेको व्यक्ति वडाध्यक्षको साथबाट रकम नभेटिएको बताए । अनुगमन समितिका अधिकृत पनेरुले भने–‘वडाध्यक्षको साथबाट ४ हजार रुपैयाँमात्र प्रहरीले बरामद गर्यो । निर्वाचनको लागि पैसा बाँड्न गएको भन्ने तथ्यलाई भेटिएको रकमले पुष्टि नगर्ने भएपछि हामीले वडाध्यक्षलाई छोडेर फर्कियौं ।’
यस विषयमा वडा नं. १६ का वडाध्यक्ष आचार्यले पैसा बाँड्न राति गएको भन्ने तथ्य सरासर झुट भएको बताए । वडाध्यक्ष आचार्यले भने–‘म घरदेखि ५ मिनेटको दुरीमा थिए । दिनभरी ६ वटै वुथमा गएर सर्वदलीय बैठक बसेर आफन्तको घरमा जाँदा यस्तो गलत प्रचारबाजी गर्ने काम गरियो । शुरुमा ६/७ जना भाइहरु थिए र छलफल गर्दै थियौं । पछि नेपाली कांग्रेसका ५०/६० जना भन्दा बढि मानिसहरु जम्मा भए र यस घटनालाई अतिरञ्जित गर्ने काम गरियो । जब कि मसँग ४/५ हजार रुपैयाँ पनि थिएन ।’
वडाध्यक्ष आचार्यको साथमा भएको मोवाइल खोसेका स्थानीयले झण्डै २ घण्टासम्म नियन्त्रणमा लिएर राखेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको टोली आएपछि प्रहरीले खानतलासी गर्दै वडाध्यक्षलाई १ घण्टासम्म गाडीमा राखेको थियो । वरपर जम्मा भएको भीडलाई हटाएपछि प्रहरीले वडाध्यक्ष आचार्यलाई महेन्द्रगुफा भन्दा अलि तल पु¥याएर निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरुलाई बुझाएको थियो । निर्वाचन आयोगबाट अनुगमन समितिका अधिकृत निल पनेरुको टोलीले घटनाको अवस्थाको बारेमा बुझेपछि गरिएको उजुरी अनुसार प्रमाण नपुगेको भन्दै वडाध्यक्ष आचार्यलाई छोडिदिएको थियो ।